एक एक्वैरियममा पुरुष स्कलरबाट महिलालाई कसरी फरक पार्ने?
घर र परिवार, पालतू जनावर अनुमति
केहि जान्दछु कि एक एक्वैरियम मा एक पुरुष स्कलर देखि एक महिला को भेद गर्न को लागि, वास्तव मा यो धेरै सजिलै संग गरिन सक्छ। यो माछाको सेक्स बीच भेद गर्न सक्षम हुनु महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसको बिना यो राम्ररी रोप्न र एक्वैरियममा राख्ने असंभव छ।
महिला र पुरुषबीच के फरक छ?
धेरै अन्य माछा माछाहरू जस्तै, यस परिवारमा आफ्नै विशेषताहरु संग दुवै लिंगको प्रतिनिधि पनि छन्। जब माछा प्रजनन गर्दा, यो मनमा हुनु पर्छ कि महिला र महिला पुरुष तराजूहरु एक सानो अंतर छ, जब सम्म उनि9-10 महिना सम्म पुग्छ। यो पछि मात्र यो देखिन्छ कि पुरुष पृष्ठीय फिन महिलाहरु भन्दा धेरै विकसित छ। यसको अतिरिक्त, फिनको पछिल्ला भागमा धेरै स्ट्रिपहरू देखिन सक्दछ ।
स्केलर को महिला र पुरुष बीचको अंतर पनि टाउकोको अगाडिल्लो भागमा रहेको छ, किनभने नर मा यो उत्तल छ, र महिला मा, यसको विपरीत, यो ठोस छ।
स्केलरको सेक्स निर्धारण
एक्वैरियम माछाको धेरै मालिकहरू सोचिरहेका छन् कि पुरुष स्कलरबाट महिलालाई कसरी फरक पार्छ, किनकि उनीहरूले प्रजनन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो मा शुरुवातको लागि सेक्सको परिभाषा यस्तो सरल कार्य होइन, किनभने उनीहरूको यौन परिचय स्थापित गर्न अनुभव र ध्यानको अभाव लगभग असंभव छ । र एक अनुभवी एक्जिस्टिस्ट काम बिना कठिनाई संग सामना गर्न सक्छ।
यदि यो माछाले यौन यौन परिपक्वता सम्म पुग्न सकेन भने यो यो गर्न गाह्रो छ। तथापि, दुवै यौन यौन सम्बन्धहरू छन्, जसको अनुसार उनीहरूको यौन सम्बन्ध निर्धारण हुन सक्छ।
माछाको प्रजनन अंगहरूको विशेषताहरू
स्क्वारीरी माछाहरू एक्वैरियमको आकर्षक र असामान्य निवासहरू मानिन्छ। पुरुषबाट पुरुषलाई कसरी फरक पार्ने, यी अद्भुत प्राणीहरूको हरेक मालिकलाई थाहा हुनुपर्छ। ती व्यक्तिहरू एकदम सानो हुर्काउन र अग्लो सम्म पुग्न सम्म पर्खनु पर्दछ, किनकि उनीहरूलाई निश्चित हेरविचार चाहिन्छ।
कस्तो प्रकारको स्कुलर पुरुष, र कुन - महिलाको निर्धारण गर्न, तपाईंले उनीहरूको जेनेटिटलहरूको जाँच गर्न आवश्यक छ। त्यतिबेला माछा माछा वयस्क हुन्छ, सानो सानो ट्यूब गुनासो को लागी लाग्न सुरु हुन्छ: महिला को ओभोपोसिटर छ, र पुरुष को माध्यमिक नलिका छ। जीनटल्स वाटरल जोडे भएका पंखहरू पछि पर्छन्, र तिनीहरू स्प्वचिंगको समयमा अझ बढी महसुस हुन्छन्। राम्रो माछाको जीनियसियायको जाँच गर्न, यो एक अलग एक्वैरियममा प्रत्यारोपण गर्न आवश्यक छ ।
माछाको लिंग निर्धारण गर्न र जेनेटिटलहरूको रूप बनाउन सक्छ। पुरुषमा, ओवनले एक चिनो, संकीर्ण ट्यूबको आकार छ जुन पेंसिलको टिप जस्तो देखिन्छ। महिला ओभोसोसिटरसँग बेलनाकार र अधिक गोल आकार छ।
शरीरको आकारमा मतभेद
यदि तपाईं पुरुष स्कलरबाट महिलालाई कसरी भेद गर्ने प्रश्नको साथ चिन्तित हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि यो माछाको शरीर निरीक्षण गर्न आवश्यक छ। यो पुरुषको माथेमा एक घुमाउरो घोरमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यसले तिनको मुखमा महत्त्वपूर्ण र अझ अधिक अभिव्यक्ति बनाउँछ। वयस्क व्यक्तिहरूमा वयस्क वृद्धि बढ्दो छ, तर पहिलो संकेत विकासको प्रारम्भिक चरणमा पहिले नै उल्लेखनीय हुन सक्छ ।
यसको अतिरिक्त, यो सानो आकार र महिलाहरुमा धेरै शरीर को आकार को आकार मा ध्यान दिन को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँलाई थप प्रजननका लागि माछाको धेरै जोडीहरू खरीद गर्न आवश्यक छ भने, यो एक सानो सानो र दुईजना ठूलो व्यक्तित्व छान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
सेक्सको व्यवहारमा मतभेद
धेरैलाई आश्चर्य लाग्यो कि कसरी महिला स्कलरबाट माछाको व्यवहारको आधारमा महिला भेद गर्ने। प्रजननको मौसमको समयमा, स्कालरहरू, जुन प्रायः एक सुन्दर जीवनशैलीको नेतृत्व गर्दछ, आफैलाई मात्र एक साझेदार छान्नुहोस् र जोडीहरू सिर्जना गर्नुहोस्। पहिले नै स्थापित "परिवार" को पहिचान गर्नुहोस् पनि शुरुवात हुन सक्छ। जोडाले अलग राख्छ र अण्डा फेंक गर्न सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ खोज्छ।
उनीहरूको प्रकृतिले यी अचम्मका एक्वैरियम माछाहरू मोनोगुमस हुन्। माछाको लागि पार्टनरको मृत्युको रूपमा साझेदारको हानि वा माछाको लागि एकदम ठूलो तनाव हो जुन तिनीहरू अक्सर जीवित हुन सक्दैनन्। स्केलेरीयन्सहरूले एक्वैरियम वा पर्खालका पर्खालहरूलाई मारेर आफूलाई चोट पुर्याउन सक्दछ, जसले तिनीहरूको मृत्युको निम्त्याउँछ। यसैले तपाईं माछाको लागि साझेदारहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, तर पहिले नै निर्मित जोडीहरू नष्ट नगर्नुहोस्।
स्प्विङ समयमा सेक्सको निर्धारण
स्प्यानिंग समयमा स्केलरको सेक्सको सही रूपमा निर्धारण गर्न, यो एक अलग एक्वैरियममा धेरै यौन परिपक्व व्यक्तिहरूको समूह सेट गर्न आवश्यक छ। माछा खरिद गर्दा, यो 4-6 जवान नमूनाहरू एकैचोटि किन्न र सबैसँग एकै ठाउँमा खानु राम्रो हुन्छ। तथापि, तपाईंलाई एक विशाल ठूलो एक्वैरियम को चयन गर्न आवश्यक छ, ताकि स्कालर आराम ले रहयो। माछा पिच, केहि सानो र ठूलो व्यक्तिहरू प्राप्त गर्न वांछनीय छ, यो यसले विभिन्न सेक्सको स्केलर्स प्राप्त गर्ने संभावना बढ्नेछ, र यसैले पछिल्लो स्प्यान्ट जोडेको गठन।
माछाको सेक्स निर्धारण गर्न, तपाईंले स्प्यानिङ व्यक्तिहरूको व्यवहारलाई पछ्याउन आवश्यक छ। जब तिनीहरू भित्तामा पुग्छन्, उनीहरूले जोडाहरू बनाउँनाले आफ्नैमा, त्यसपछि स्पन गर्न सक्नेछन्। यस समयबाट, तपाईंलाई माछाको व्यवहारलाई राम्ररी निगरानी गर्न आवश्यक छ किनकि यसले मात्र उनीहरूको यौन पहिचान निर्धारण गर्नेछ, तर यो पनि बुझ्नका लागि कि तिनीहरूले कसरी जोडीहरूमा वितरित हुन्छन्।
तथापि, यो सम्झना हुनुपर्छ कि एकै यौनको व्यक्ति पनि जोडी बनाउन सक्छ, स्वाभाविक रूपले, उनीहरूको सन्तान हुनेछैनन्। कहिलेकाँही स्प्विङ जोडेहरूले ध्यानको चिन्हहरू देखाउँछन्, जुन स्नेह र छुन सक्छ वा केहि हदसम्म आक्रामक हुन सक्छ।
नजिकको अवलोकनको साथ, तपाईं देख्न सक्नु भएको छ कि स्त्री महिला स्प्विङ छ, तर यो एक्वैरियम को लागी लामो समय लाग्छ, यसैले पल सम्झन सक्दैन।
यो उल्लेखनीय छ कि पुरानो स्केलर बन्छ, यसको लिङ्ग निर्धारण गर्न सजिलो छ, किनकि अधिक परिपक्व उमेरमा यौन अंगहरू निस्कन्छ, जसले तिनीहरूलाई राम्रोसँग जाँच गर्न सम्भव बनाउँछ।
अक्सर, स्कालरहरू दिउँसो दिउँसो दिउँसो अण्डा लगाउँछन्। सम्पूर्ण स्पाइलिङ प्रक्रिया एकदम केहि समय लाग्छ र लगभग 1.5 घण्टा सम्म रहन्छ। यस समयमा, महिला नियमित रूपमा पङ्क्तिहरू एक्वैरियम र अण्डाको सतहमा लगभग तानिएको छ। पुरुषले एकै समयमा आफ्नो साझेदारहरूको सबै आलोचना दोहोरिन्छ र यसबाट अण्डालाई निषेध गर्दछ। यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ जब स्क्वालर स्प्यानर, पुरुषबाट एक महिलालाई कसरी फरक पार्छ। माछाको फोटो लिङ्ग मतभेदको नजिकको हेर्न अनुमति दिन्छ।
अर्को पोतमा छिटो सङ्कलन र अण्डाको स्थानान्तरणलाई दिइएका स्क्यानारहरूले हरेक2हप्तालाई स्प्यान गर्न सक्छन्। उनीहरूले यो एक साधारण एक्वैरियममा गर्न सक्छन्, तथापि, बच्चाहरूको सफल पछाडिको लागि यो अलग-अलग खाली ठाउँ प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। एक्वैरियमको अन्य बासिन्दाहरूको भित्ताबाट बच्न क्चचको संरक्षण गर्न यो आवश्यक छ, किनकि कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन कि स्प्यान्ट जोडे क्लचको लागि आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न सक्षम हुनेछ। यसको अतिरिक्त, यदि एक साधारण मछलीघर मा लार्वा र त्री रहछन, त यसलाई राखन को लागी लगभग असंभव हुनेछ।
विभिन्न प्रकारका रोगहरू संग त्रास को संक्रमण देखि बचने को लागि, केहि औषधिहरु लाई पानी मा थप जान सकिन्छ, जो सबै कवकहरु र जीवाणुहरु लाई नष्ट गर्न मा मदद गर्नेछ। यो सम्झना महत्त्वपूर्ण छ कि क्यारियरले अक्सीजनलाई निरन्तर पहुँचको आवश्यकता पर्दछ, किनकि यो यताउताबाट छोटो दूरी हुनु पर्छ, तर यस्तो तरिकाले कि हावा बुलबुले यसलाई पर्दैन।
पिल्ला कसरी गर्मीमा व्यवहार गर्दछ? गर्मीमा कुकुर कसरी मद्दत गर्ने?
चिहुआहुआको मालिकहरूको समीक्षा प्रजातिको लाभ र हानि
अपरिचित कुत्तों को लागि खाना पालतू जनावर को स्वास्थ्य को आधार हो।
बिरालोको सबैभन्दा सुन्दर नस्ल - हामी के कुरा गर्दैछौँ?
पहिलो छनौट (बिरालो खाना): संरचना, फाइदाहरू, समीक्षाहरू
होटल Villa महासागर हेर्नुहोस्3* (श्रीलंका / Wadduwa): विवरण, फोटो र समीक्षा
ZIL 5301 - व्यापार ट्रक
मास्को र आजको इतिहासमा अबाबा स्क्वायर
वित्तीय बयान 2013 को संरचना
हटाउने gynecomastia: सर्जरी र पुनःस्थापना
विधानसभा Wardrobe: यो कसरी आफूलाई के गर्ने?
को कलाई गर्न कुहिनो देखि हात मा दुखाइ: उपचार
अन्तरिक्ष अन्वेषण: इतिहास, समस्या र सफलताको
घर मा बुनाई कपाल कसरी बनाउने
BANDOG: नस्ल वर्णन, सामग्रीको विशेषताहरु। कुकुर लड जातिहरु
ककड़ी गद्दा: समीक्षा र विवरण